Yini imodeli 130 | Ezezimali Zomnotho
Encarni Arcoya | 10/06/2021 08:04 | Umnotho jikelele
Umthombo Uyini imodeli 130: Famisenper
Lapho wenza umsebenzi wezomnotho, enye yezinqubo okufanele uzenze ukukhokha isitolimende ngenxa yentela yomuntu ohola ngayo Lokhu kwenziwa ngemodeli 130. Kepha, Yini imodeli 130?
Uma usanda kubhalisa, noma uma ufuna ukwazi ukuthi iyiphi ifomu 130 nokuthi uligcwalisa kanjani kahle, sizokutshela konke odinga ukukwazi mayelana nale nqubo futhi, ngaphezu kwakho konke, ukuthi ungathobela kanjani uMgcinimafa ukuze kungabi nesijeziso.
1 Yini i-Model 130
2 Ugcwalisa kanjani
2.1 Isinyathelo ngesinyathelo kumodeli
Umthombo: i-ejensi yentela
Imodeli 130 ifaka phakathi ukuthi iyiphi i- "Imbuyiselo yekota yengeniso yabantu". Kuyinkokhelo eyenziwa ngendlela ehlukanisiwe (ekhokhelwa njalo ezinyangeni ezintathu) ukuthi iyiphi ingxenye yenkokhelo okufanele yenziwe ngentela yomuntu ngamunye ikhokhelwa uMgcinimafa.
Kunjalo, akubona bonke abantu ababophezelekile ukwenza kanjalo, kuphela lezo ezifakiwe ezimweni ezilandelayo:
Ukuthi benza imisebenzi yezomnotho, kufaka phakathi leyo yezolimo, imfuyo, amahlathi noma ukudoba. Vele, kufanele basungule indlela yokulinganisa eqondile, kungaba ejwayelekile noma eyenziwe lula.
Ukuthi benza imisebenzi yobungcweti. Ngaphandle uma i-70% yemali yakho engenayo isivele inokubamba noma idiphozi ku-akhawunti. Uma kunjalo, akudingeki bagcwalise iFomu 130.
Uma kungukusebenzisana komphakathi kanye / noma imiphakathi yempahla. Kulokhu, umlingani ngamunye kufanele enze inkokhelo ngokuya ngokuhlanganyela kwabo.
Manje njengoba sekucacile kuwe ukuthi iyiphi ifomu 130, sekuyisikhathi sokuthi wazi ukuthi ungayigcwalisa kanjani ukuze ilungele uMgcinimafa futhi ingadonsi amehlo akho; noma okubi kakhulu, bakubeka unswinyo.
Kufanele ukhumbule ukuthi, Esigabeni seDeclarant, kufanele ugcwalise zombili i-NIF negama nesibongo. Lapho-ke, endaweni yokuqongelela, kubalulekile ukuthi ucacise ukuthi ubhekisela kumuphi unyaka wezimali nokuthi iyiphi inkathi yekota.
Lapho umemezela ukubuya kwenetha, kufanele ukhumbule ukuthi iyanqwabelana. Lokho wukuthi, ake ucabange ukuthi ikota yokuqala osuyenzile yenze ama-euro ayikhulu ngenzuzo. Kwikota yesibili, unama-euro angama-100. Kodwa-ke, uma ugcwalisa ifomu 200, kufanele ungeze imali oyiholile kwikota yokuqala naleyo yesibili. Ngamanye amagama, kuleli kota yokugcina bekungeke kube ngama-euro angama-130 wenzuzo, kepha kube ngama-euro angama-200 (300 + 200 kwikota yokuqala).
Kwenzeka okufanayo ngezindleko ezingemuva kwalokho, kuzofanela ungeze lezo zekota zonke, wandise izindleko obukade unazo kuleyo eqhubekayo.
Ngokuvamile, Imodeli 130 inezigaba ezintathu ezihlukene.
Isigaba I lapho imali nezindleko zibekwa khona futhi kutholakala ukuthi kungakanani okungu-20% wokukhipha izindleko emholweni. Ngemuva kwalokho, ukubanjwa okungenzeka ubukade unakho kanye nalokho okukhokhile ezindaweni zokuhlala ezedlule kuyasetshenziswa futhi uzothola umphumela.
Isigaba II, kugxilwe kulabo abenza umsebenzi wezolimo, amahlathi, ukudoba noma imfuyo, okuzofanele bagcwalise imodeli kule ngxenye.
Y isigaba III, okungukufingqwa kwakho konke okungenhla lapho kusinikeza khona isibalo sokugcina, okungaba ukukhokha noma ukunxephezela.
Isinyathelo ngesinyathelo kumodeli
Umthombo: Usizo Lwezintela
Ukwenza kucace, gcina okulandelayo engqondweni:
Ibhokisi 1: lapho kufanele ubeke imali engenayo yonyaka.
Ibhokisi 2: faka izindleko zonyaka.
Ibhokisi 3: lokhu kuyazenzakalela, okwenzayo ukususa imali engenayo nezindleko.
Ibhokisi lesi-4: lizokucela ukuthi ubale mathupha ukuthi ungakanani u-20% wemiphumela yebhokisi 3, uma nje lo mphumela ube muhle. Yini okungekuhle? Beka uziro.
Ibhokisi 5: kulesi sikhala uzoba nesamba samabhokisi amabili, u-7 no-16. Lawa ngamanani amamodeli ayi-130 owethule ngaphambilini. Uma, ngokwesibonelo, kungokokuqala konyaka, ngeke kudingeke ubeke noma yini lapha. Kepha yebo kusuka ku-trimester yesibili. Kungakho kubalulekile ukuthi ube nemibhalo engenhla esandleni.
Ebhokisini lesi-6: uzoba nesamba semibango oyifakile noma oyisebenzise kuwe.
Ibhokisi 7: okunye ukukhipha, kusuka ebhokisini 5 no 6 ebhokisini 4. Ngamanye amagama. Okufanele ukhokhe (ibhokisi 4) kuzodonswa ekubanjweni (5 no-6) osekucatshangwa ukuthi kufakwe egameni lakho.
Kuze kube lapha kungaba ngabantu abazisebenzayo noma abantu abanemisebenzi yezomnotho. Manje, uma usebenza kwezolimo, imfuyo, ukudoba noma amahlathi, kufanele ugcwalise okulandelayo:
Ibhokisi 8: kufanele ufake imali engenayo unyaka wonke, kufaka phakathi izibonelelo, usizo ...
Ibhokisi 9: 2% wenani lebhokisi langaphambilini lizosetshenziswa ngaphandle kokubheka izindleko.
Ibhokisi le-10: usebenzise ukubeka okugodliwe obekufanele ukusebenzise kuma-invoyisi owenzile.
Ibhokisi le-11: Yilo elizokhipha amabhokisi u-9 no-10, linikeze umphumela ongaba muhle noma ube muhle.
Ekugcineni, Ingxenye III yisifinyezo, futhi amabhokisi ahambisanayo yilawa:
Ibhokisi le-12: lapho ubeka khona inani lamabhokisi 7 no-11. Futhi, kungaba yinani elihle noma elibi.
Ibhokisi 13: into abaningi abangayazi ukuthi, uma imali yakho engenayo iphansi, uMgcinimafa ukuvumela ukwehliselwa kuma-euro angama-100. Okuhle kakhulu ukuthi ubheka imininingwane mayelana nalelo bhokisi elithile ukuze wazi inani ongalifaka kwisaphulelo (uma ungakwazi).
Ebhokisini le-14: kuzoba nomehluko phakathi kwamabhokisi u-12 no-13.
Ibhokisi 15: kusetshenziselwa ukuqopha amanani amabi. Ngamanye amagama, uma unemiphumela engemihle ebhokisini le-19, kufanele ukukhombise, futhi, kufanele wazi ukuthi inani laleli bhokisi alikwazi ukuphakama kunalelo le-14.
Ibhokisi le-16: uma ibhokisi le-14 belilungile futhi ukhokha nemalimboleko ngokuthenga noma ukulungisa ikhaya lakho, ungadonsa lezozindleko lapha. Ungadonsa malini? Imali esebhokisini 3 (noma 8 uma unezolimo, imisebenzi yemfuyo ...). Ukuthi uma, umkhawulo ubekiwe kuma-euro angu-660,14.
Ibhokisi 17: kulula, umphumela wokukhipha amabhokisi we-14 no-15.
Ibhokisi le-18: kuzofanele uligcwalise kuphela uma kunesimemezelo esihambisanayo. Ngaphandle kwalokho, ihlala ingunothi noma ingenalutho.
Ibhokisi le-19: ekugcineni, leli bhokisi lihudula i-17 ne-18, linikeze umphumela oyilowo womodeli 130. Uma ulungile, kuzodingeka ukhokhe; futhi uma sinegethivu, ungakhokhela lezi zinhlobo zonyaka ezilandelayo (ungabenza babuyise lokho okukhokhe kakhulu).
Ngale ndlela, ungaba nomhlahlandlela futhi uqonde kangcono ukuthi imodeli 130 iyini nokuthi ungayigcwalisa kanjani ngendlela efanele ukuze konke kulunge.
Indlela ephelele ye-athikili: Ezezimali Zomnotho » Umnotho jikelele » Yini i-Model 130